Iyo iPhone 7 nhare ichave yakakura | IPhone nhau
Yekutanga ye iPhone 7 ichave yakakura sensors ichave inogadziriswa
Vazhinji vashandisi vakagamuchira jagi remvura inotonhorera pavakaverenga iyo Wall Street Journal ruzivo rwakavimbisa kuti iyo iPhone 7 yaizosvika pasina hukuru hwekuchinja dhizaini. Sekureva kweWSJ, Apple yanga isina nguva yekuburitsa zvavakaronga mu2016, saka vachatofanira kumirira kusvika 2017 votanga kugadziriswazve kukuru pagore regumi regumi iPhone. Asi kana shanduko diki dzanga dzisiri nhau dzakaipa mukati mawo, mamwe masosi anovimbisa kuti iyo iPhone 6 / 6s kesi uye vadziviriri hazvingakwani iyo iPhone 7.
Ruzivo rutsva zvinounza Mac Otakara. Midhiya yeJapan inovimbisa, ichitsanangura masosi muketani yekupa, kuti kuchave neshanduko pamberi pechiteshi, kunyanya kupfuura iyo nharembozha ichave yakakura Kupfuura iyo yapfuura modhi, ichave iine yakagadziriswa proximity sensor uye ambient mwenje sensor haizove munzvimbo imwechete. Nezvose izvi, dai zvainge zvakaoma kuti mabutiro mamwe chete ave anoshanda nekuda kwehukuru hwemakamera, izvo Mac Otakara anotiudza ndezvekuti epamberi epanzvimbo yekudzivirira haizove inoshanda kana.
Hatizokwanise kushandisa iPhone 6 / 6s kesi pa iPhone 7
Munguva pfupi yapfuura, vamwe vagadziri vemafirimu ekudzivirira eLCD kubva kuAlibaba.com varega kugamuchira maodha nekuti iyo iPhone 7 ine proximity sensor kumberi yakachinjirwa kuita mbiri tsananguro mukuwedzera kune ambient mwenje inonzwika padivi ichabuda munzira. Kuruboshwe chikamu kurudyi uye ichave yakakura.
Iyo kamera iri kumashure kweiyo iPhone 7 yakaitwa hombe uye yekumashure kamera yeiyo iPhone 7 Plus ichave mbiri, saka iyo iPhone 6s uye iPhone 6s pamwe kesi haigone kushandiswa uye zvingangoita kuti LCD inodzivirira mafirimu etc. izvo zvakare hazvigone kushandiswa mumhando nyowani.
Kana izvo zvinotaurwa naMac Otakara ichokwadi, tinogona kungofunga kuti pane chikonzero cheiyi shanduko. Iyo iPhone 7 inogona kusvika ne Yechokwadi Tone kuratidza yeiyo 9.7-inch iPad Pro uye kurira kwe headset kunogona kusimudzira asi, kudzamara yapihwa zviri pamutemo, tinogona kupedza maawa tichifungidzira. Nei iwe uchifunga kuti Apple ichaita shanduko idzi?
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone 7 » Yekutanga ye iPhone 7 ichave yakakura sensors ichave inogadziriswa
Modular smartwatch pfungwa. Makwikwi emangwana eApple Watch?